November 3, 2008 at 7:47 pm Leaveacomment
यस बर्षको उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता को उपाधिले पुरस्कृत हुन सफल भएको मा राज कुमार, तिमीलाई मेरो तर्फ बाट बधाई तथा उत्तरोत्तर प्रगतीको हार्दिक शुभ-कामना ।
हाइप्रोफाइलका व्यक्तिहरूको अपहरण गरेर नेपाल प्रहरीको निन्द्रा उडाउने अपराधी हुन् अमर टण्डन । जसको फन्दामा १६ भन्दा बढी व्यक्ति परिसकेका थिए । उनको अपरहणको निशाना थियो- नेपाल, काम गर्ने थलो भारतको दिल्ली । अनि त्यही चतुर अपराधीलाई ट्रयापमा पारेर जेल पुर्‍याउने साहसिक प्रहरी निरीक्षक हुन् राजकुमार सिलवाल, जसले २२ दिन दिल्ली बसेर जालो निर्माण गर्दै टण्डनलाई नेपाल आउन बाध्य बनाई त्रिभुवन विमानस्थलमा पक्राउ गरे । भारतमा गएर जालो बुन्दै अपराधीलाई नेपाल भित्र्याएर पक्राउ गर्न सफल भएकोमा सिलवाल ०६५ को उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता चुनिएका छन् । उनै सिलवालसँग टण्डन पक्राउको पेरिफेरिमा केन्दि्रत भएर गरिएको अपहरण संवाद-
अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा काम गर्दै गर्दा एक्कासि मेरो पोस्टिङ क्राइमब्रान्चमा भयो । पहिलेदेखिकै रहरको ठाउँ । पत्र बुझेँ र लागेँ हनुमानढोकातिर ।
थप लेख पढ्न भित्र आउनुहोस ….
Entry filed under: आफनै कुरा, Nepal, story.
तिहारको हाइकु	Windows7 is coming soon